Al-shabaab badan oo maanta lagu laayay deegaan ka tirsan G/Jubada Hoose. – Hornafrik Media Network
Al-shabaab badan oo maanta lagu laayay deegaan ka tirsan G/Jubada Hoose.
Hornafrik-Kadib dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose kaas oo u dhaxeeyey Ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa Jubbaland iyo Al-Shabaab ayaa waxaa dagaalkaas guulo ka sheegay dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Cali Ibraahim oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda ay weerar qorsheysan ku qaadeen Saldhig Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Sanguuni ee G/Jubbada Hoose iyo deegaan o dhow Magalada Dhoobleey,isla markana ay ka dileyn 30 ka tirsanaa Al-Shabaab 3 Gaarina ay kala wareegeen sida uu hadalka u dhigay.
Xaaladi ugu darneyd oo ka taagan Fatahaadaha Baladweyn.